Shariif Xuseen" Dowladda way ka gaabisay la dagaalanka al-Shabaab" - Awdinle Online
Shariif Xuseen” Dowladda way ka gaabisay la dagaalanka al-Shabaab”
January 7, 2020 (Awdinle Online) –Shariif Xuseen Roobow oo ka faallooda arrimaha ammaanka ayaa sheegay inay korodhay awoodda ururka Al Shabaab, sababo ku aadan Shabaabka oo dhaqaalo xoogan hela iyo dowladda oo ka mashquushay la dagaalankooda.
“Kooxaha dowladda ka soo horjeeda aad bay awoodooda u korortay, lacago ayay qaadaan, canshuuro ayay uruuriyaan, badeecadaha soo degaaya ayay lacago ka qaataan. Lacag badan bay helleen, awoodna way leeyihiin.”Ayuu yiri Shariif Xuseen Roobow.
” Dowladdii la rabay inay Shabaab la dagaalanto waxay ku jirtaa xilli kala guur ah, waqti la rabo in doorasho la galo, marka waxayba mashquul ku tahay hawlahaan doorashooyinka, Maamul Goboleedyadii oo ay iska soo horjeedaan iyo Maamulkii Galmudug oo dhismahiisu socdo, marka dowladdii aad bay mashquul u noqotay. “Ayuu yiri Shariif Xuseen Roobow.
“Ciidanka Dowladda ee nabadgelyada ama Nabad Suggida waan ognahay tayadooda iyo cidda maanta gacanta ku haysa. Awoodeedii, caqligeedii iyo maaliyadba waxay laheyd dowladda dhinaca doorashooyinka ayay u wareejisay.”Shariif Xuseen Roobow ayaa yiri
“Waa sanadkii ugu dambeeyay, sanadka soo socda 2021 dowladda waxaa laga rabaa inay doorasho samayso, arrimahaasi oo is biirsaday ayaa keenay inay kororto awoodda Shabaab. Shabaab oo lacago helay ama maaliyad fiican haystay sanooyinkan ugu dambeeyay oo dakhli fiicanaa soo gala. Dakhliga dowladda qaadanayso mid ka badan inay soo gasho ayaa la qiyaasayaa.”
Previous articleDhageyso :-Guddiga Maalmaha Xurriyada oo kulan yeeshay
Next articleDowladda Kenya oo ka hadashay Khasaaraha weerarkii deegaanka Sareedo.
Guddi uu Magacaabay Madaxweyne Waare oo gaaray Jowhar
Sarkaal Boolis oo lagu dilay Muqdisho & faah faahin laga helayo
Madaxweynaha Somaliland oo jawaab deg deg ah siiyay Farmaajo
Banaanbaxyo xoogan oo ka socda Gobolka Gedo & Saraakiisha Ciidamada…
Ciidamada Kenya oo dad kale ka afduubtay Gobolka Gedo
Golaha Shacabka oo leh kulamadii ugu dambeeyay, xilli….
Farmaajo oo ka hadlay Amniga & Doorashooyinka Soomaaliya
Ra’iisul Wasaaraha Cusub oo Maanta xilka la wareegaya